Fotoana famakiana: 7 minitra Tendrombohitra mahatalanjona, lohasaha mamelana, riandrano, farihy, sy ny biby dia, Tranon'i Eoropa amin'ireo tahirin-javaboary tsy hay hadinoina indrindra eto an-tany. Mandany ny tany maitso midadasika izay maniry eo amin'ny lohataona, 5 amin'ireo valan-javaboary tsara tarehy indrindra any Eropa dia valan-javaboary arovana izay mandray ireo mpandeha…
Fotoana famakiana: 7 minitra Ny sasany amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any Eropa dia tsy voavidim-bola ary mora azo. Na izany aza, ny dia mankany Eropa dia mety ho lafo be raha tsy mikasa mialoha. Raha manitatra ny teti-bolanao ny ankamaroan'ny renivohitra eropeana, misy toerana vitsivitsy…
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, ...
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny fitsangatsanganana any Eropa dia mandeha an-tongotra mankany amin'ny tanànan'ny lapa, ala, sy ny toetra tsara indrindra sy riandrano mahafinaritra indrindra. Na mitsangatsangana mankany Italia na Suisse ianao, drafitra a 2 fitsangatsanganana Euro volana, na mba manana herinandro iray ho an'ny firenena eoropeana iray fotsiny,…
Fotoana famakiana: 5 minitra Ny fitsangatsanganana no zava-mahadomelina farany fa tokony hataonao tsy misy entana, indrindra ho an'ireo layovers na raha efa maimaim-poana fotsiny ny andro any amin'ny iray amin'ireo tanàna malaza Alemaina. Izahay dia manana ny fampahalalana rehetra ilainao amin'ireo toerana enta-mavesatra sisa tavela any Alemana ho an'ny telo amin'izany…
Fotoana famakiana: 4 minitra Ny fitsangatsanganana an-tampony ho an'ny laharana farany any Berlin dia tsy maintsy atao na dia eo aza i Berlin izay toerana mahafinaritra hitsidihana azy! Efa ampy ny zavatra tena nahasarika tany Alemaina renivohitra mba hiaro anao nonina nandritra ny andro. Na izany aza, fitsangatsanganana an-andro avy any Berlin mankany amin'ny tanàna manodidina sy ny ambanivohitra afaka…